Ciidamo la wareegay xarunta madaxtooyada gobolka Hiiraan | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home Wararka HNN Ciidamo la wareegay xarunta madaxtooyada gobolka Hiiraan
Ciidamo la wareegay xarunta madaxtooyada gobolka Hiiraan
Baladweyne(HNN)- Howlgalo qorsheysan oo uu horkacayo guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa xalay saqdii dhexe lagu weeraray xarunta madaxtooyada gobolka oo saldhig u aheyd Cali Maxamed Caraale oo dhawaan laga qaaday xilka guddoomiyaha gobolka Hiiraan islamarkana ka soo horjeestay xil ka qaadista lagu sameeyay.
Ciidamada ammaanka gobolka oo fuliyay howlgalkan ayaa la wareegay xarunta madaxtooyada gobolka Hiiraan iyagoo gacanta ku dhigay guddoomiyihii gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday Cali Maxamed Caraale mana jirto wax khasaaro ah oo ka dhashay howlgalkan.
Ammaanka xarunta madaxtooyada gobolka ayaa waxaa hadda si wada jir ah u sugaya ciidamada ammanka iyagoo ka foojigan weerar soo qaadan maleeshiyaad isku heyb yihiin guddoomiyihii hore Cali Maxamed Caraale oo hadda isna lagu hayo guriga gobolka.
Cali Maxamed Caraale ayaa diiday inuu xilka ku wareejiyo guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, isagoo sheegay in sifo sharci aheyn xilka looga qaaday.
Previous articleKulan lagu tageerayo Agaasimaha cusub ee isbitaalka gobolka Hiiraan oo lagu qabtay Baladweyne
Next articleWasiir Goodax oo fariin u diray hogaanka iskuullada dowladda